Qiimayntii Wakaaladaha Dakhliga Iyo Maaliyadaha Degmooyinka Oo Socota. - Cakaara News
Qiimayntii Wakaaladaha Dakhliga Iyo Maaliyadaha Degmooyinka Oo Socota.
Jigjiga,(cakaaranews) Isniin, 29ka August, 2016. Waxaa ka socda xarunta deegaanka ee jigjiga gaar ahaan hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI shirkii qiimaynta waxqabadka bilihii ugu danbeeyay ee loo qabtay wakaaladaha dakhliga degmooyinka deegaanka, maamulada magaalooyinka iyo xafiisyada maaliyadaha iyo horumarinta dhaqaalaha ee degmooyinka iyo maamulada magaalooyinka DDSI.
Waxaana shirkan qiimaynta ah hogaaminaya wasiirka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI mudane Axmed Cabdi Maxamed, wasiir ku xigeenka madaxtooyada DDSI mudane Deeq Cabdilaahi Buraale, maareeye ku xigeenka wakaalada dakhliga DDSI mudane Yaasiin Cumar iyo madaxa arimaha siyaasada XDSHSI mudane Cumar Maxamed.
Shirkan qiimaynta ah oo ah mid lagu xoojinayo ka midho dhalinta dadaalka loogu jiro in wadankeenu ka mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay, ka guul gaadhista qorshaha kobaca iyo isbadalka dhaqaalaha, sare uqaadista guud ahaanba dakhliga deegaanka iyo in la hirgaliyo qorshaha ah ladhalinta dakhli balaadhan oo daboola dhamaan miisaaniyada deegaanka.
Waxaana shirkan qiimaynta ah diirada lagu saarayaa fulinta qorshihii u yaalay wakaaladaha dakhliga iyo maaliyadaha degmooyinka deegaanka iyo maamulada magaalooyinka. Waxaa kale oo shirkan qiimaynta xooga lagu saarayaa sidii loo fulinta lahaa qorshaya 2009TI. Ee dhinaca dakhliga iyo maaliyadaha degmooyinka iyo maamulada magaalooyinka DDSI.